ရွှေတိဂုံဘုရား ပြန်ဖွင့်ရန် အစီအစဉ်မရှိသေး
ပြည်တွင်းသတင်း , May 28, 2020
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို ဇွန်လတစ်ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပါက်သက်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ တာဝန်မှုးရုံးကို Yangon Nation ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ “ရွှေတိဂုံစေတီတော်ဘဏ္ဍာတော်ထိန်းဂေါပကအဖွဲ့အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရဲ့ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်တွေ နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည်သာဖြစ်ပြီး ဇွန်လတစ်ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ...
မြောက်ဒဂုံက ဘိုဘိုမင်းဟိုတယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ (Video)
လူနာအမှတ်၂၀၃, ၂၀၄, ၂၀၅ နှင့် ၂၀၆ တို့တွေ့ရှိခဲ့သည့် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိဘိုဘိုမင်းဟိုတယ်ကို မေလ ၂၈ရက်နေ့မှာ lockdown ချထားလိုက်ပါတယ်။ မြို.နယ် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီက ကြိုတင်သိရှိခြင်းမရှိပဲ ကန်.သတ်စောင့်ကြည့်ခံဖို. နိုင်ငံခြားကပြန်လာသူတွေကို ဒီဟိုတယ်မှာ ထားရှိတာကြောင့် မပြေလည်မှု...
“အစိုးရနဲ့ပြည်သူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြလို့ သူများနိုင်ငံတွေလောက် အထိမနာခဲ့တာ”( ပန်းသီး)
“အစိုးရနဲ့ပြည်သူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြလို့ သူများနိုင်ငံတွေလောက် အထိမနာခဲ့တာ” လို. နာဂစ်ကာလနှင့် COVID ကာလအခက်ခဲကို နှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော်” ပန်းသီး”
ဂေါ်ဖီထုပ်တောင်သူတွေကို ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ ကမ္ဗောဇ မိသားစုရဲ.အလှူ
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းက ပအိုဝ့်၊ တောင်ရိုးနှင့် ကယန်းတိုင်းရင်းသားတွေ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ်တွေဟာ အခုကာလအတွင်း ဝယ်ယူမယ့်သူမရှိလို့ ဖျက်ဆီးပြစ်ရတော့မယ့်အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ ဦးအောင်ကိုဝင်းကဝယ်ယူမယ့်သူမရှိလို့ ဖျက်ဆီးပြစ်ရတောမယ့်ဂေါ်ဖီထုပ် (၅) သိန်းကျော်ကို ဂေါ်ဖီထုပ်တောင်သူတွေကို ကူညီဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ကုန်တင်ကားကြီးများနဲ့ ဖြန့်ဝေလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ဝယ်ယူပြီး တဲ့...
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် တံတားလေး ဘူတာပေါ် သစ်ပင်လဲကျ
ပြည်တွင်းသတင်း , May 27, 2020
၂၇.၅.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ည ၇ နာရီခွဲ အချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ တံတားလေးဘူတာပေါ်သို့ ပိနေသော မလေးရှားပိတောက်ပင် လုံးပတ်(၁)ပေခွဲခန့်၊ အမြင့် (၁၅)ပေခန့် လဲကျ ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဖြစ်စဉ်ကြောင့်...
ပြည်ဆေးရုံကြီးက မေ့ဆေးအထူးကဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်ကို ပြည်မြို.က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုကြ
ပြည်ဆေးရုံကြီးက မေ့ဆေးအထူးကဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်ဟာ COVID-19 ရောဂါပိုး မတွေ.ရှိတော့တာကြောင့် ဒီကနေ. ၂၅-၅-၂၀၂၀ ရက် မနက်မှာ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးက ဆင်းခွင့်ရပြီးဒီကနေ. ၂၇-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ.မှာ ပြည်မြို.ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာမကြီးကို ပြည်မြို.ကို ဝင်ကတဲက လမ်းတလျောက်က ပြည်သူလူထုကနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီး...
ရုပ်ရှင်၊သဘင်၊ဂီတ အနုပညာရှင် ၁၆၅ ဦးကို အာယုသုခုမအဖွဲ့ က ၁သိန်းစီ ကျန်းမာရေးကူညီမှုပြု
အာယုသုခုမအဖွဲ့ ရဲ. ပထမအကြိမ်မြောက် ရုပ်ရှင်၊သဘင်၊ဂီတ အနုပညာရှင်များအတွက် ကျန်းမာရေးကူညီမှု ဂါရဝပြုပွဲကို ဒီကနေ.မနက် ၉ နာရီက မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးခန်းမမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခမ်းအနားမှာ ရုပ်ရှင်၊သဘင်၊ဂီတ အနုပညာရှင်များအတွက် လှူဒါန်းငွေတွေကို အာယုသုခုမအဖွဲ့ ရဲ. ကိုယ်စား...
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် Mask ပြိုင်ပွဲ ပထမဆုရ သူများ မနက်ဖြန် ဆွေးနွေးမည်။
ပြည်တွင်းသတင်း , May 26, 2020
နိုင်ငံတော် ၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Mask ပြိုင်ပွဲ ပထမဆုရ သူများနှင့် မနက်ဖြန် ဆွေးနွေးမည်။ ဒေါက်တာကျော်ကျော်ဝင်း (Eric Yang) USA ဦးမျိုးစန်းဦး (Myo Gyi) Japan ...
COVID-19 ရောဂါပိုး ရှိ/မရှိ မန္တလေးမြို့တွင် စစ်ဆေးပေးနိုင်ပြီ
COVID-19 ရောဂါပိုး ရှိ/ မရှိ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပေးမည့်စက် မန္တလေးမြို့သို့ ရောက်ရှိပြီးဖြစ်ရာ မေလ ၂၇ ရက်မှ စတင်၍ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး၊ မန္တလေးမြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာရဲလွင်ထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါစက်ကို မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်...
မကွေးမြို.ရှိဈေးများ ပုံမှန်ပြန်ဖွင့်နိုင်ရေးအတွက် ၊ စည်ပင်သာယာအဖွဲ့ ၊ ဈေးကေါ်မတီ အဖွဲ့ ၊ အစိုးရအဖွဲ့တို့ လိုက်လံစစ်ဆေးမှုကို ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သူအား မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ.ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညို က သူ.ရဲ.လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ အခုလို တုန်.ပြန်ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။...